Sina H manamboatra vy lalina fanaovana sary lozisialy hydraulic fanamboarana sy orinasa | Zhengxi
Ny milina fanodinam-pirinty lalina H dia mety indrindra amin'ny fizarana ampahany amin'ny metaly toy ny manenjana, miondrika, mametaka, mamorona, manafosafo, manapoka, manitsy, sns, ary ampiasaina indrindra amin'ny famelarana haingana sy fananganana metaly.
Rafitra sy firafitra
Antsipirian'ny Cushion Die
Ny platen'ity milina ity dia nohosorany Q345B lovia vy misy hatevin'ny 120mm. Ny milina iray manontolo dia entina amin'ny hafanana hampihenana ny adin-tsaina sy hanatsarana ny fitoniana ao amin'ilay masinina. Ny vodin-tsolika dia voahosotry ny grinder lehibe iray ary afaka mahatratra ny fisaka0.003mm.
Previous: 4 tsindry lalina fanaovana tsindry hydraulic
Manaraka: Press Press SMC BMC hydraulic